Vaovao - Ny mpivarotra vy sy ny indostrian'ny indostria dia maminavina fa hiakatra ny tsenan'ny vy atsy ho atsy
Ny mpivarotra vy sy ny indostrian'ny indostria dia maminavina fa hiakatra tsy ho ela ny tsenan'ny vy
Fetim-pirenena aorian'ny fitakiana mafy ny vy, antenaina hiakatra tsy ho ela ny tsenan'ny vy.
Raha ny filazan'ny mpivarotra vy sy ny indostrian'ny indostria. Bar ankehitriny, coil mihodina mafana. Coil sy medium afangaro mangatsiaka - takelaka matevina sy karazany manokana misy fironana samihafa.
Mikasika ireo fitaovan'ny bar, nandritra ny Andron'ny firenena dia vitsy ny fangatahana tany amin'ny faritra Beijing-Tianjin-Hebei, ary taorian'ny Fetim-pirenena dia nanomboka nitombo ny fangatahana. Nitombo tsikelikely ny isam-bolana, indrindra fa ny fangatahana rebar 25 mm nitombo be. 16 Oktobra, ny tsenan'i Beijing amin'ny famokarana vy Chenggang misy sakana 25mm rebar ho an'ny 3700 yuan / taonina. Raha ampitahaina amin'ny 9 Oktobra hatramin'ny 40 yuan / taonina, ny mpivarotra vy sy ny indostrian'ny indostrialy dia mino fa, raha jerena ny vidin-tsolika manta ankehitriny sy ny vidin'ny rebar futures, ny fameperana ny tontolo iainana amin'ny fararano sy ny ririnina dia manamafy, antenaina fa ny vidin'ny tsenan'ny vy fananganana any Beijing amin'ny faran'ny volana oktobra dia hitsangana tsy tapaka.
Coil mihodina mafana, fizarana vy any atsimo ary ireo indostrian'ny indostria hita taorian'ny fanadihadiana, noho ny fitakiana kamiao mavesatra ankehitriny dia nitombo be. Excavator. Miakatra ny kamiao sy ny milina fanodinana hafa, ny fiakaran'ny vidin'ny coil mafana ankehitriny. Ny varotra kamiao mavesatra any Shina dia nahatratra singa 136000 tamin'ny volana septambra, tafakatra 63 isan-jato isan-taona, naseho ny angona. Ny antontan'isa avy amin'ny Fikambanan'ny indostrian'ny indostrialy sinoa dia mampiseho fa tamin'ny volana septambra, ireo orinasa 25 voarohirohy tamin'ilay fanadihadiana dia nivarotra milina fitrandrahana data 26.034, hatramin'ny 64,8 isan-jato isan-taona. Araka io vinavina io, ny vidin'ny tsena coil mihodina vao haingana dia hanana krizy mihazakazaka somary matanjaka.
Mikasika ny takelaka coil mihodina mangatsiaka, nanomboka tamin'ny fetim-pirenena, niroborobo ny famokarana sy ny varotra indostrian'ny fiara sy ny fitaovana an-trano any Shina. Taorian'ny fetim-pirenena dia matetika ny orinasa any ambany dia manana fangatahana famenoana izay mampiroborobo ny fitakiana vy. Ny antontan'isa avy amin'ny Fikambanan'ny mpanamboatra fiara mitondra fiara any Shina dia mampiseho fa nahatratra 1,91 tapitrisa ny tsenan'ny fiara mpandeha tamin'ny volana septambra, miaraka amin'ny fitomboana 7,3% isan-taona, mitazona ny taha-pisondrotana isan-taona manodidina ny 8% mandritra ny telo volana misesy (7,7% isan-taona amin'ny volana Jolay ary 8,9% isan-taona amin'ny volana Aogositra). Ny fampisehoana ankapobeny ny fangatahana any ambany dia tsara kokoa, ary ny vidin'ny vokatra mangatsiaka dia tohana mafy.
Ao amin'ny takelaka matevina, Fetim-pirenena aorian'ny faritra Beijing, Tianjin ary Hebei ao amin'ny tsena matevina takelaka, dia antenaina fa hitohy io fironana io atsy ho atsy.
Ny mpivarotra vy sy ny indostrian'ny indostria dia mino fa ny tsena vy ankehitriny dia misy ifandraisany. Amin'ny lafiny tsara, tamin'ny volana septambra, ny totalin'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa lehibe manerana ny firenena dia nitombo 96,6% isam-bolana, taorian'ny nitomboan'ny fivarotana vy tamin'ny fetim-pirenena, nanohana ny vidin'ny toerana matanjaka. Rehefa mihabe ny fangatahana any ambany. Ny vidin'ny vy any aoriana dia mbola manana toerana hiakarana. Raha ny fijery bearish, Andro Nasionaly aorian'ny fitomboan'ny firoboroboan'ny vy dia tsy mihena ny tsindry destocking; Fanamafisana ny politika amin'ny sehatry ny fananan-tany; Ny famokarana vy dia nijanona ho avo; Aorian'ny fidirana amin'ny fararano sy ririnina, ny fananganana any amin'ny faritra avaratra dia miatrika ireo toe-javatra tsy manara-penitra toy ny fihenan'ny stagnation, izay hampiverina ny vidin'ny vy amin'ny vanim-potoana manaraka.
Vaovao Metallurgical China (Fanontana 7, Fanontana 07, 20 Oktobra 2020)